Ahoana No Ahafahantsika Mampiroborobo ny Fifanakalozan-dresaka Japoney-Sinoa Amin’ny Aterineto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2017 8:18 GMT
Manana hafatra voahevitra tsara mamaly ireo fihetsiketsehna manohitra ny Japoney any Shina i Joi Ito. Ampahany amin'izany:
Amin'ny maha-Japoney izay manana fangorahana sy fahatsoram-po be ho an'i Shina, ny zavatra tena hitako fa sarotra dia ny miezaka manakatra ny rohin-kevitra samihafa sy ny fomba ahafahan'ny vahoaka Japoney hanavaka izany. Indrindra indrindra, vao mainka manasarotra izany ny hetsika feno fankahalana sy tafahoatra ataon'ny Shinoa sasany, mba tsy hilazako hoe tena matahotra mihitsy ny hanomboka fifanakalozan-kevitra. Amin'izany fotoana izany ihany, ireo mpanao an-tendrony ao Shina dia mandrehitra hatrany ireo tia tanindrazana ao Japàna ary tsy manampy amin'ny fanalefahana kokoa ny feo. Mino aho fa tsy hanampy amin'ny fifandraisana na oviana na oviana ny fankahalana.
Iray amin'ireo olana lehibe indrindra ny zava-misy hoe tsy mahatakatra ireo olana ny ankamaroan'ny Japoney. Teboka hafa kosa ny hoe ny ankamaroan'ny Japoney no tsy dia mpanohana loatra ny miaramila. …
Mba vakio izy rehetra azafady.
Nandefa imailaka namaly an'i Joi, Isaac Mao, sy Andrea Leung aho mba hanolotra hevitra amin'ny fomba mety ho azonay anombohana blaogy na karazana tranonkala mampiasa rindrambaiko sosialy izay mety hampitony kokoa ny fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto misy eo amin'ny vahoaka Japoney sy Shinoa. Te-hanao zavatra hanamora ny fifanakalozan-kevitra misy eo amin'ny teratany Shinoa sy Taiwanezy ihany koa i Isaac. Tanisainy ho toy ny lasitra azo halaina tahaka ny Dialogue Now ho an'ny Indi-Pakistana.
Manana sosokevitra? Hevitra? Liana ny hanampy? Mba tsindrio eo amin'ny rohy ”fanehoankevitra” dia mba hampahafantaro anay azafady.